General English Archives - Learning English Myanmar
Feb 1, 2019 | General English
(1) Done ! ကောင်းပြီသဘောတူတယ် ဖြစ်စေရမယ် (2) Awesome ! မိုက်လှချည်လား… (3) Tell that to the marines တောမှာသွားပြော (4) Lead your own way ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ့်ရေး (5) You are very talkative မင်းအရမ်းစကားများတာပဲ (6) That’s the beauty of it အဲဒါလေးတွေ...
Business Term (စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
Jan 29, 2019 | General English
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်ကျောင်းသားများအားလုံး (မသိမဖြစ်) စီးပွားရေးအသုံးအနှုန်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ MSMEs – Micro Small & Medium Enterprise (အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) ROI – Return on Investment (စီးပွားရေး...
Jan 12, 2019 | General English
ကား၊ ရထားနဲ့ ခရီးသွားလျှင် by ကို သုံးဖို့ပြင်၊ခြေကျင်ဆို on foot သုံးgo နောက်မှာ to ကိုသုံးsit ထိုင်တာလေး တွေ့ရင်ကွယ် down လေး ကပ်ပေးမယ်stand ဆိုရင် မတ်တတ်ရပ်၊ နောက်က up လေးကပ်ဟိုဟာဒီဟာ ကြည့်ရင်ကွယ် look at ကိုသုံးမယ်fire တွေ့တော့ put နောက်တော့ out...
Essay, Letter အတွက် အလွန်အရေးပါသောစကားလုံးများ
Jan 10, 2019 | Course, General English
By the way = ဒါနဲ့ စကားမစပ်If so = ဒီလိုဆိုရင်၊ဒါဆိုရင်So = ထို့ကြောင့်Therefore = ထို့ကြောင့်Thus = ထို့ကြောင့်၊ ဤသို့ဖြင့်၊That is why = ဒါ့ကြောင့်For this reason = ဤအကြောင်းကြောင့်even if = ပင်လျင်၊တောင်မှAs you know = မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲActually = တကယ်တော့In fact =...
Jan 9, 2019 | Course, General English
How boring ! ပျင်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ။How disappointing ! စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။How annoying ! စိတ်တိုဖို့ကောင်းလိုက်တာ။How irritating ! စိတ်တိုဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။How exciting ! စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလိုက်တ။How interesting ! စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။How...
အလွတ်ကျက်ရထားသင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲ ၁၀၀
brush my teeth – သွားတိုက်သည်wash my face -မျက်နှာသစ်သည်takeabath -ရေချိုးသည်wash my hands – လက်ဆေးသည်watch television – တီဗွီ ကြည့်သည်listen to the radio – ရေဒီယို နားထောင်သည်have tea/ coffee – လက်ဖက်ရေ /ကော်ဖီသောက်သည်have my breakfast...